Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ezuru ekwentị m, iPhone ma ọ bụ gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Kedu ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ezuru gam akporo ma ọ bụ iOS smartphone ma ọ bụ furu efu? Nzọụkwụ anyị kwadoro ka ị soro
Na-efu ma ọ bụ na-ama anyị ama ohi bụ ahụmịhe kachasị njọ enwere ike ịnweta taa gbasara elektrọnik ndị ahịa, ọ bụghị naanị maka ihe dị mma ọ gụnyere (ọnụahịa na-adịwanye elu) kamakwa maka ọdịmma onwe anyị nke anyị na-adịkarị n'ime.
Ntuziaka iji gbochie nke a ime dị mfe mana ọ naghị adị ire mgbe niile, ebe ọ dabere na naanị nlekọta na nlebara anya anyị nwere. Google na Apple na-enye anyi ụfọdụ ngwa ọrụ eji agbake ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume opekata mpe anyị nwere ike ịchekwa ozi nkeonwe anyị niile. Site na foto gaa na data nkeonwe dị ka akaụntụ akụ, adreesị ma ọ bụ akara ekwentị.
1 Gị iPhone e zuru ma ọ bụ furu efu?
1.1 Anyị arụgoro [Search] na iPhone anyị
1.2 Anyị enweghị [Search] rụọ ọrụ na iPhone anyị
2 Ekwentị gị furu efu ma ọ bụ nke ezuru ezu bụ gam akporo
Gị iPhone e zuru ma ọ bụ furu efu?
Ọ bụrụ na ngwaọrụ nke furu efu ma ọ bụ zuru ezu sitere na apụl apụl, usoro a ga - adị iche ma anyị nwere nhọrọ “Chọọ”, ebe ọ bụ na nhọrọ a dabere ma anyị nwere ike ịchọta ọnụ site n'onwe anyị ma chịkwaa ya site na ngwaọrụ apụl ọzọ, ma ọ bụ site na weebụsaịtị n'onwe ya.
Rụọ ọrụ a nhọrọ dị mfe, anyị dị nwere ịbanye: ntọala / Paswọdu na akaụntụ / iCloud / Search.
Anyị arụgoro [Search] na iPhone anyị
Ị nwere ike iji ngwa ọchụchọ iji gbalịa ịgbake ngwaọrụ gị ma ọ bụ mee ihe ndị ọzọ iji kpuchido ozi nkeonwe gị n'ụzọ dị mfe.
Banye iCloud.com na weebụsaịtị n'onwe ya ma ọ bụ jiri ngwa ọchụchọ na ngwaọrụ Apple ọzọ.
Chọta ngwaọrụ gị. Mepee ngwa nyocha na ngwa apụl gị ma ọ bụ gaa iCloud.com wee pịa ọchụchọ. Họrọ ngwaọrụ ị na-achọ ịhụ ọnọdụ ya na maapụ. Ọ bụrụ na ngwaọrụ dị nso, ị nwere ike ime ka ọ wepụta ụda ka gị onwe gị ma ọ bụ onye ọzọ nwee ike ịchọta ya.
Kaa dị ka ihe furu efu. The ngwaọrụ ga-ekpochi remotely na a koodu na inwere ike gosiputa ozi ahaziri na nọmba ekwentị gi nke ga egosi na mkpọchi ihuenyo nke ngwaọrụ furu efu ma ọ bụ zuru ohi. A ga-enyocha ọnọdụ nke ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ n’inwe Apple Pay na kaadị akwụmụgwọ jikọtara, a ga-egbochi ya mgbe ị gbanwere ọnọdụ furu efu.
Kpesa ọnwụ ma ọ bụ izu ohi n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị nche obodo kacha nso. Ha ga-ajụ gị maka nọmba Oghere Usoro nke ọnụ na ajụjụ. Oghere Usoro ahụ nwere ike ịchọta ma ọ bụ na mbụ nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ na iTunes ma ọ bụrụ na ị nwere njikọ.
Hichapụ ọdịnaya site na ngwaọrụ. Iji gbochie mmadụ inwe ike ịnweta data nkeonwe anyị n'ụzọ ọ bụla, anyị nwere ike ihichapụ ya remotely. Ihe a bụ nke kachasị njọ ebe ọ bụ na ewepụla ihe niile, anyị na-ehichapụ ebe nchekwa nke ọnụ anyị, na-ewepụ kaadị niile ma ọ bụ akaụntụ jikọtara. Ozugbo ehichapụ nhọrọ niile, ngwaọrụ agaghịzi achọta ma na ngwa na iCloud web. Ntị! Ọ bụrụ na ewepụrụ ngwaọrụ ahụ na akaụntụ anyị mgbe anyị jiri Hichapụ ọdịnaya, njedebe ngwụsị agakwaghị arụ ọrụ, ya mere onye ọ bụla ọzọ ga-enwe ike ịgbalite ma jiri ọnụ ya.
Gwa onye ọrụ ekwentị gị maka ọnọdụ gị iji were ihe ndị dị mkpa gbochie iji ekwentị gị. Inwere ike kpuchi gị site na mkpuchi gị n'aka onye na-ahụ maka ọrụ gị.
Ọ bụrụ na ị goro Apple elekọta + na ọ na-ekpuchi megide ohi ma ọ bụ ọnwụ, ị nwere ike ịme nkwupụta maka ngwaọrụ ahụ.
Anyị enweghị [Search] rụọ ọrụ na iPhone anyị
Ọ bụrụ na ọ dị nwute na anyị enweghị nhọrọ a na-arụ ọrụ na iPhone anyị agaghị enwe ike ịchọta ya, ma anyị nwere ụzọ ndị ọzọ iji kpuchido data na ozi anyị.
Gbanwee okwuntughe maka Apple ID gị. Site na ịgbanwe okwuntughe ị ga - egbochi mmadụ ịnweta data gị iCloud ma ọ bụ jiri ụfọdụ ọrụ ya.
Gbanwee okwuntughe ịchekwara na akaụntụ gị iCloud, nke a nwere ike ịgụnye ịnweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, Facebook ma ọ bụ twitter.
Kpesa n offices aka ndi uwe ojii ma obu ndi ochichi ndi obodo, n’inye onu ogugu nke igwe.
Gwa onye ọrụ ekwentị gị ekwenti iji mee ihe kwesiri ekwesi.
Ọ bụrụ na ị na-eche ma enwere ngwa ma ọ bụ usoro ọ bụla iji chọta ngwaọrụ ọzọ karịa [Search]. O di nwute na obughi.
Ekwentị gị furu efu ma ọ bụ nke ezuru ezu bụ gam akporo
Ọ bụrụ na ọnụ nke i tufuru ma ọ bụ zuru zuru ezu dị n'ime sistemụ arụmọrụ gam akporo, anyị nwere ike ịchọta ya site na iji ngwaọrụ ejikọrọ ọzọ ịnweta nke a adreesị weebụ. Adreesị weebụ a jikọtara na akaụntụ google gị ka ọ wee dị mkpa ịbanye na ya. Nhọrọ ịchọta ngwaọrụ anyị na-arụsi ọrụ ike na ndabara ya mere, ihe kacha ekwe omume bụ na ị nwere ya n'ọrụ.
Rụọ ọrụ a nhọrọ anyị ọnụ dị mfe dị ka ịnweta ntọala / Google / Nche / Chọta m ngwaọrụ.
Banye na akaụntụ Google gị site na ihe nchọgharị weebụ na nke a nduzi.
Anyị ga-enweta maapụ ebe anyị nwere ike ịchọ Kpọmkwem ebe anyị gam akporo ngwaọrụ, n'ihi na nke a na-eme ọnụ ga-ejikọrọ na ịntanetị, anya ke Google Play, nwere ọnọdụ nyeere nakwa Enyere ndị Chọta ngwaọrụ m nhọrọ.
Chọta ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na anyị kwenyere na ọnụ nwere ike ịdị nso, anyị nwere ike ịgbalite a Nhọrọ a na-akpọ «kpọọ ụda» nke a ka ọnụ ya wee malite ịgba maka 5 nkeji na olu zuru oke ọbụlagodi na ọ dị jụụ ma ọ bụ na-ama jijiji.
Mkpọchi ngwaọrụ. Nhọrọ a na-enye anyị ohere kpochie ọnụ ya na ntụtụ, ụkpụrụ ma ọ bụ okwuntughe. Ọ bụrụ na anyị enweghị usoro igbochi kere, anyị nwere ike ịmepụta ya n'oge a. Anyị nwere ike iji nọmba ekwentị dee ozi na mkpọchi ihuenyo, ka ha nwee ike weghachiri anyị ya ma ọ bụrụ na ha efunahụ ya.
Hichapụ ngwaọrụ anyị. Nhọrọ ikpeazụ na nke kachasị mma ga-ehichapụ data anyị niile ma ọ bụ ozi dị nro na ngwaọrụ ahụ. Site na kaadị akwụmụgwọ jikọtara na okwuntughe anyị nwere ike ịchekwa na ihe nchọgharị ma ọ bụ ngwa.
Kpesa izu ohi ma ọ bụ ọnwụ nke ndị uwe ojii kacha nso, na-enyere ha aka nọmba Oghere Usoro ahụ.
Kpọtụrụ onye na-ahụ maka ekwentị mkpanaaka gị na igbochi ekwentị akara.
Ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ ịchọta ngwaọrụ m na-arụ ọrụ, anyị agaghị enwe ike ịchọta ọnụ ya, ma ọ bụrụ na anyị nwere nhọrọ ndị ọzọ iji gbochie ha ịnweta akaụntụ google anyị ma ọ bụ data dị nro. Anyị ga-agbanwe okwuntughe nke akaụntụ Google anyị ozugbo, na nkwanye m bụ na a na-eme nke a na ihe niile anyị weere dị ka ihe dị mkpa, ka ị ghara ịmetụta ma nzuzo anyị na data ego anyị.
N'ezie, echefula ịkọ izu ohi ma ọ bụ mfu na kpọtụrụ onye ọrụ ekwentị iji zere iji aghụghọ nke akara anyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Kedu ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ezuru gam akporo ma ọ bụ iOS smartphone ma ọ bụ furu efu? Nzọụkwụ anyị kwadoro ka ị soro